Howlgal balaaran oo ka dhan ah Dagaalyahanada Al-Shabaab oo ka bilowday Buuraha Gal-gala « AYAAMO TV
Howlgal balaaran oo ka dhan ah Dagaalyahanada Al-Shabaab oo ka bilowday Buuraha Gal-gala
1313 Views Date March 30th, 2014 time 8:59 am
Ciidamada daraawiishta maamulka Puntland ayaa saaka ka bilaabay buuraha Galgala ee gobolka bari howlgal balaaran oo ka dhan ah xoogaga Al-shabaab ee halkaas fariisimaha ku leh.
Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa sheegay in howlgalkan ujeedadiisu tahay sidii ay uga hortegi lahaayeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo ku soo qulqulaya buuraha Galgala kuwaasoo ka yimid koonfurta Somalia oo dagaalo ay kaga furan yihiin.
Ciidamo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa la dhigay meelaha laga galo buuraleyda Galgala iyo dhinaca xeebaha degaanada Ceelaanyo iyo Laas-qoray si aaney halkaas uga gudbin xoogaga Al-shabaab ee doonaya iney galaan buuraha Galgala.
Sidoo kale ciidamada amaanka Puntland ayaa heegan sare la geliyey si ay u sugaan amaanka magaalooyinka waaweyn ee maamulkaas oo laga cabsi qabo iney Al-shabaab ka fuliyaan weeraro.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Jen. Cabdi Qeybdiid ayaa magaalada Gaalkacyo ka sheegay in firxadka xoogaga Al-shabaab ay soo gaareen deegaano ka tirsan gobolka Mudug lagana yaabo qaarkood halkaas iney uga gudbaan dhinaca Puntland.
Maamulka Puntland ayaa horey u sheegay iney isha ku hayaan howlgalada ka dhanka ah Al-shabaab ee ka socda koonfurta Somalia ayna ka feejigan yihiin firxadka Al-shabaab ee laga yaabo iney soo gaaraan degaanada maamulkaas.